Ngathi-Beijing Allwin Pack Co., Ltd.
Zonke izisombululo zephakheji yokutya yokutya iAllwin, Thengisa ngaphezulu kwamazwe angama-50
Kwinqwelo moya Casserole ngefoyile ye Isikhongozelo
Ityhubhu yoLungiso lweAluminiyam
Isitya se-Oval aluminium
Gumbi ngefoyile ye Isikhongozelo
Ezinye izikhongozeli zeAluminiyam
Thatha i-Exil Container
Round ngefoyile Isikhongozelo
Lwamaxande ngefoyile ye Isikhongozeli
Iphepha ngefoyile ye Sheet
Ujikeleze Thatha iipaneli zeFoyile
Isikwere seFoyile yesikwere
Amacwecwe eTafile yeAluminiyam
Ipart kunye nePie
I-Allwin Pack ibekwe e-Beijing yase-China, elishishini elibanzi lokupakisha ukutya, elikhethekileyo kwisikhongozeli se-aluminium, izikhongozeli zeplastiki, uyilo lobumbeko kunye nophuhliso, i-R & D yokuzenzekelayo, ukuthengisa kunye nenkonzo yabathengi njengenye yenkampani eDibeneyo. Isiseko sokuvelisa sika-Allwin Pack siseHebei, eTianjin, eShandong naseGuangdong, sineewaka ezingama-30, 000 zeemitha zesikwere zokucwangcisa uthuli, kunye nesixhobo esizenzekelayo sokupakisha iirobhothi kunye nokubuyiswa kwenkunkuma kunye nenkqubo yokurisayikilisha. ukuvavanywa kwempahla eluhlaza kunye nokuvavanywa kokusebenza kwelebhu, uyilo lobunjineli, siphuhlise kwaye savavanya phantse iwaka lomngundo oqhubekekayo njengenkokeli kolu shishino.
I-Allwin Pack isebenzisa izinto ezingavunyelwanga zonke ezihambelana nemigangatho yendalo esingqongileyo, onke amanqanaba okutya. Sakhe ixesha elide
intsebenziswano nabathengi abasuka eMntla Melika, eYurophu, eJapan, eOsturalia, eAsia ngokunjalo nakwiinqwelomoya, ivenkile enkulu, ukutya kunye nabavelisi bokutya.
I-Allwin Pack ityikitye isivumelwano sexesha elide kunye nenani levenkile ezinkulu eMelika, ukubanika iipani ezipheleleyo / ezinesiqingatha, njl njl, iimveliso zika-Allwin Pack ziphumelele ukwamkelwa kwimakethi yaseMntla Melika ngenxa yomgangatho ophezulu, i-Allwin Pack uye wanconywa njengomthengisi wekhwalithi.
Iimveliso ezifakwe kwi-Allwin Pack zibandakanya izikhongozeli zealuminium, isingxobo seplastikhi, isiciko seplastikhi, imiqulu yeefoyile zasekhaya, iphepha lefoyile elisongiweyo, iipleyiti zegrill, ukutywina ubushushu kunye nokususa isikhongozeli njl.njl.
I-Allwin Pack ilawula umgangatho wemveliso ngokungqongqo kwaye ilanda yonke inkqubo yemveliso ngenxa yetekhnoloji kunye neenkonzo ezisemgangathweni, kunye ne-eco-friendly, impilo kunye nengqondo yokhuseleko, sijolise ekwenzeni ishishini lokupakisha elilahlayo ngokugqwesileyo elinemveliso esemgangathweni kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo.
I-Allwin Pack ibekwe e-Beijing yase-China, ishishini elibanzi lokupakisha ukutya, elikhethekileyo kwisikhongozeli se-aluminium, izikhongozeli zeplastiki
Beijing Allwin Pack Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini: